समय जुनसुकै बेला फेरिन सक्छ, सुखःदु’ख आउँदै–जाँदै गर्छन् तसर्थ कहिल्यै घ’मण्ड नगरौं ! – Dainik Sangalo
November 15, 2020 167
व्यक्तिलाई आफ्नो सुख सुविधा र उत्कृष्ट जीवनशैलीमा घ’मण्ड हुन्छ । त्यसकारण उनीहरु अरुलाई खासै महत्व दिँदैनन् । घ’मण्डका कारण थुप्रै स’मस्या बढ्न सक्छन् । यहाँ यस्तै एउटा प्रेरक प्रसंगबारे कुरा गरिएको छ जसमा समय जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने जानकारी दिँदै कसैले पनि घ’मण्ड गर्न नहुने बताइएको छ ।– प्रचलित लोक कथा अनसार पुरानो समयमा एक राजकुमार शिक्षाका लागि आश्रम जाने बेला सधैंजसो एक वृद्ध व्यक्तिलाई भि’ख मा’गिरहेको देख्ने गर्थे । ती वृद्ध बाटोमै बसिरहन्थे र त्यहाँ आवतजावत गर्ने बटुवासँग पैसा र खाना माग्ने गर्दथे ।
उनले राम्रोसँग खान पाउँदैनथे त्यसकारण उनी निकै दुब्लो थिए, उनको क पडा पनि निकै फोहोर हुन्थे ।– राजकुमारसँग सुख सुविधाका हरेक वस्तु थिए तर उनले ती वृद्ध व्यक्तिलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनथे । एकदिन उनले भि’ख मा’ग्ने व्यक्तिलाई भने, ‘तिमीसँग केही पनि छैन, भि’ख माग्छौ, यस्तो जीवन किन बाँ च्न चाहन्छौ ? किन भागवानलाई आफू भएठाउँ चाँडै नै बोलाउन प्रार्थना गदैनौं ?’– वृद्ध व्यक्तिले भने, ‘म सधैं साँझ बिहान भगवानसँग आफ्नो जीवन कुनै कामको नभएको भन्दै मलाई उहाँहरु भएठाउँ बोलाउन प्रार्थना गर्छु तर भगवानले मेरो प्रार्थना सुन्नु नै हुन्नँ ।
सायद भगवान म यसै दुनियाँमा रहूँ भन्ने चाहनुहुन्छ ता कि मानिसहरुले मलाई देखेर समय जुनसुकै बेला परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने जानून् ।’– उनले राजकुमारलाई भने, ‘कुनै बेला मसँग पनि धन थियो । मसँग पनि सुख सुविधा थिए तर मैले कहिले पनि मानिसहरुको मद्दत गरिनँ, मलाई मेरो रुप रंग र धनमा घ’मण्ड थियो । अब मेरो सबैकुरा ब’र्बाद भएको छ, मसँग खानका लागि खाना छैन, लगाउनका लागि क’पडा छैन । मलाई देखेर सबैले यो बुझ्नुपर्छ कि कसैले पनि घ’मण्ड गर्नु हुँदैन, सुख–दुः ख आइरहन्छन्, समय जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुनसक्छ ।
Prevप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना सांसदलाई काठमाडौं बोलाए प्रचण्डले
Nextगरिबलाई रुवाउने चाड नआइदिए पनि हुन्थ्यो’